कुरो बनाएर कलाकारले हसाएको त प्राय देखी रहेका छौं। हामी पनि यदा कदा यसरी नै एक आपसमा हास्ने गर्छौं। तर कहिले कांही सांचो कुराले पनि हसाउंछ। अमेरीकामा सेरा पेलिन उपराष्ट्रपतीको चुनाबका लागी लढ्दा उनैले भनेका भाषणका अंश टिभीका कार्यक्रममा भनेर हसाइने गरिन्थ्यो।
केही पहिले तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाको भारत भ्रमण नजानको कारण दर्शाइएको अन्तरबार्ता हेरेर हांसेको थिएं। अन्तरबार्तामा "कांहा त्यसो हुनु नी उसो पो हो" भन्दै केटाकेटी फकाउने पाराले कुरा गरिएको थियो। भारत भ्रमण बेला ज्वरोले बोल्नै नसेकेकी सुजाताको उक्त अन्तरबार्ता यांहा पढ्न सक्नुहुनेछ। भारत भ्रमणको लागी साडी वाडी किने पनि बिरामी भएका कारण जान नसकेकी सुजाता कोइराला हिजैबाट गणतन्त्र नेपालकी उप-प्रधान मन्त्री भएकी छन। कांग्रेसका लागी उनको योगदान त तिनै कांग्रेसजनले जानुन तर दौंतरी पाठकका लागी भने नागरिक पत्रिकाबाट लिइएको कार्टुन प्रस्तूत गरेको छु। यसमा केही थप्नु परे तल थप्दै जानुहोला।
Solution Is Possible said...
अब माधव नेपालले नुनको सोझो गरे त के भयो र ? माधवको पनि रहर पुरा गराए गिरिजाले अनि माधवले चाही छिरिजा पुत्री कुजता उर्फ गिरिजा पुत्री सुजाताको रहर पुरा गराइदिए |
खै हाँस्ने कि रुने ? मैले त केही सोच्नै सकिँन ।
आखीर गणतन्त्रमै पनि राजाको छोरा "फ्री" मा राजा हुने जस्तै, कुनै एकजना नेताका सन्तान पनि फ्रिमै देशका ठालु हुने रहेछन भन्ने सम्म चाही मैले बुझेँ ।
गिरिजा र माधव नेपालको त सपना पुरा भए होलान,तर के यो गणतन्त्र भनेको देशको सबै समस्यालाई थाँती राख्दै, देशको सम्पती यीनै पथ-भ्रष्ट नेताहरुले यसरी नै बाँडी-चुँडि खाने शासन पद्दती हो त ?
सुजाताको जोक्स मैले पनि पढेँ । तर हाँसो उठेन । गम्भीर बनायो । too bad jokes.
म त माकुनेलाई दोष दिन्न बा, राजनीतिज्ञ त परे, कुर्सी मा झुन्डी त बस्नै पर्‍यो :)
बरु नेपाली कांग्रेस प्राइभेट लिमिटेड का अरु नेताहरु मुसो भएको देख्दा पो अचम्म लाग्यो, उनिहरुलाई नेता भए पछी कुर्सीका लागि तछांड मछांड गर्नु पर्दैन भन्या ? सुजता दौडेर पछी बाट जितिसकिन, जाबो खुट्टा तान्न पनि कति गार्हो भएको होला :D त्यती खुट्टा तान्न पनि नसक्ने हरु के राजनीति गर्न बस्या होला ;)
That means MaKuNe is safe for the moment...@#$%^(*&^
सुजाताको चाहना र गिरिजाको ग्रयाण्ड डिजाइन त्यहि हो । सुजातालाई उप प्रधानमन्त्री नबनाएको भए सरकार छिटै ढल्थ्यो अब केहि महिना पछि ढल्नेछ फरक त्यत्ति हो । यो माधव नेपाललाई पनि थाहा छ बिबिसीलाई पनि भनेका थिए । नत्र सरकार छोड्छु भनेर धम्की दिने गच्छेदार पनि चुप लाग्नुको कारण अरु के हुन्छ ?
What's the problem? Even US hasadummer president once! And again he was elected twice ;)
माकुने शुरक्षीत त के होलान र ? तर माथी साथीहरुले भने जस्तो अस्थाइ थमौतीकै लागी सुजातालाइ नियुक्ती दिएको भन्ने कुरा साचो हो कि जस्तो लाग्यो। थाइ कुर्ची त नेपालमा १००% मत ल्याए पनि हुंदैन। त्यही कुर्चीको लागी पार्टी फुटाउन कल्चर छ।
तर आज पत्रिकामा पढेको खबर अनुसार त सुजाता निकै पराक्रिमी भएको महशुस पो गरें। पार्टी मिटीगंमा सबैलाइ थर्काउनु मात्र होइन माहाअधिबेशनमा हेरौंला पो भनिछन।
हल्ला त गिरीजाले सुजातालाइ आउने माहाअधिबेशनमा कांग्रेस अध्क्ष बनाउने भन्ने पो सुनियो।
बाबुले हलो जुवा र गोरु सबै ठीक्क पारीदिएका छन। ढिक(काल्नो)मुनी जोते पनि ठिकै पातोबारीमा जोते पनि बेसै छ सुजातालाई। पाखोबारीको मालिक बाबु भए पछी खेताला, बाउसेलाई किन टेर्ने? सम्पत्ति जिजु देखी बाउ सम्म सर्बेसत्य उनकै पुर्खाको जाबो खेतला बाउसेहरु भड्खालोमा गए पनि उन्लाई चिन्ता छैन। बाउले पनि गरीखाओस न त म हुन्जेल भनेर थपथपाइ दिए पछी मैसाबको खुट्टो भुइमा हुने कुरो पनि भएन। नियती कि नियम या नतिजा, यस्तै हो काङ्रेसीजनहरुको कथा।
Well said Lekali - बाबुले हलो जुवा र गोरु सबै ठीक्क पारीदिएका छन। ढिक(काल्नो)मुनी जोते पनि ठिकै पातोबारीमा जोते पनि बेसै छ सुजातालाई।
हाम्रो नियति फगत नौटंकी हेर्दै बस्नु मात्र हो ? कुकुरझगडा भन्दा खै त फरक नयाँ नेपालको राजनीति ? कहाँ बिलायो, नागरिक आन्दोलनको शक्ति ? हामी चुपचाप सबै सहिबस्ने निरीह र हुतिहाराहरु, हामीजस्ताको यही हो नियति । यही हो भाग्य ।